Ntụgharị TCDD maka usoro mmegharị | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraUsoro nkuzi TCDD ga-emepe
16 / 11 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, Ọrụ, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Turkey
a ga-emeghegharị maka usoro ọmụmụ mmegharị nke tcdd
A ga-emepe emechi akwụkwọ TCDD. 21 February Enwere nnukwu choro maka ịmaliteghachi usoro ihe mmezi ahụ nke General Directorate of TCDD Transportation Inc. meghere na February 2018 na mmeghe nke uzo a na mbido 2020 bu ihe a n’agha.
Dika ozi enwetara site na TCDD Taşımacılık AŞ, n'ihi ụgbọ oloko a zụrụ azụ ọhụrụ, ọ dị mkpa ka e were n'ọrụ maka ndị ọrụ igwe anaghị arụ ọrụ. Na mgbakwunye, n'ihi nnukwu ọchịchọ maka ụgbọ oloko mpaghara, mkpa ịzụrụ ndị ọrụ igwe na-arị elu. Iji gboo mkpa a, TCDD Transportation Inc. na-ezube imepe usoro ihe eji emechi ọzọ na mbido 2020. Ọnọdụ maka iji uru ahụ emezi emezi, ebe usoro ọmụmụ mmezi ga-adị na ụbọchị a ga-ekwuwapụta ka emesịa.
Ọnye na-bụ Machinist?
Ọrụ injin ahụ bụ ọrụ maka ịgba mbọ hụ na ndị njem na ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ n’oge wee gafee njem n’enweghị nsogbu.
Kedu ihe Ntinye Aka Machinist gụnyere?
Na-arụzi arụmọrụ dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ nwere ọfụma n'oge njem, na iwepu ibu ma ọ bụ onye njem ma ọ bụrụ na enweghị ike idozi ya,
●● na-akọ akụkọ ọdịda ọ bụla.
Iji hụ na kpo oku nke ụgbọ a n'oge a na-enwe oge ihu igwe oyi,
Iji hụ na usoro nchebe ụgbọ oloko arụ ọrụ,
Iji hụ na e jizi ngwaọrụ eji aka ha mee nke ọma,
Iji hụ na akụrụngwa dị iche iche na-arụ ọrụ na nkọwapụta maka njem ndị dị ugbu a na ndị na-esote,
●● soro na usoro nchekwa site na iji ihe nchedo onwe onye kwesịrị ekwesị, dị ka ntị na nchedo,
Toaa ntị na nchekwa ọkụ.
Etu esi eme ihe n’ile anya?
Iji wee bụrụ igwe eji eme ihe, a chọrọ mahadum ka ha gụchaa otu ngalaba ngalaba Igwe Nrọ, Egwuregwu, Rail Systems Machinist, ilgbọ okporo ígwè ●● Igwe ọkụ eletriki, Teknụzụ ụgbọ. The Republic of Turkey State Railways (TCDD), ndị mmadụ na-achọ ka na-ekere òkè na-achọrọ isonye na na-ọrụ ọzụzụ omume. A choro ndi choro itinye aka na nkuzi a imezu ihe ndi a;
●● agaghị karịa afọ 35,
Ngụsị akwụkwọ sitere na ngalaba ngalaba ọzọ metụtara ya,
Exam Nhọrọ Onye Ọha na-ahụ maka ọha na eze iji nweta 93 na nke dị elu site na P60 (Ogo Ọkwa),
●● Ezigbo ọhụhụ na ntị,
●● iwu ejighi ndị nwoke maka ịlụ ụmụ nwoke; arụchaala ọrụ agha, kwụsịtụrụ ma ọ bụ wepụrụ ya n'ọrụ agha.
Gini bu iru eru nke ndi oru n’enwe n ’oru?
Enweghi anya anya na-egbochi ọdịiche nke agba
●● Enweghị nsogbu ịnụ ntị ọ bụla,
Inwe ihe omuma nka iji ghuta ihe eji eji oku ele oru
Igosi oke ahụ ike iguzoro ma ọ bụ jegharịa,
Ime mkpebi siri ike na dịkwa irè
Ogologo usoro ịgafe
Veysi Kurt: "Onye ọrụ ọkachamara na-akpata Nsogbu na Dị Nsọ"
Makinistat bụ ọkachamara na nsọ
Na-akụzi Ọkwọ ụgbọala na Erzincan
A ga-eme ka osimiri ndị dị na Lake Van Lake maliteghachi!
Karamürsel Mgbanwe Onye Mgbapụta ka ọ bụrụ Re-Held
TCDD 3. Nzukọ na-emezigharị na mpaghara
Onye njikwa TCDD General Apaydın, Onye isi oche nke UIC ọzọ…
Na Sivas, TCDD Lodging ga-eji maka azụmahịa
CHP GÜRER, TCDD nwere ọtụtụ ihe ime
Kedu ka a ga-esi kpọpụta ndị ọrụ TCDD na ndị KGM?
773 maka TCDD 345 maka AS A.Ş
Ntughari TCDD Station Square na Nazilli
A ga-ewu iwu karịrị akarị na Bozüyük '